Xiaomi Mi A1 ကို $225 နဲ့ US မှာဝယ်ယူနိုင်ပြီ! – AsiaApps
January 23, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Xiaomi Mi A1 ကို $225 နဲ့ US မှာဝယ်ယူနိုင်ပြီ!
Xiaomi ရဲ့ Mi A1 ကို $225 နဲ့ US မှာဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Mi A1 က US မှာတရားဝင်တော့မရောက်ရှိသေးဘူးဗျ။ Ebay ကနေ မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။ ဒီသတင်းကတော့ US ရောက်ရှိနေတဲ့ ရွှေမြန်မာတွေအတွက် ပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်လောက်မှာပါ။
Xiaomi Mi A1 ဟာတော့ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလကမှထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Mi A1 ရဲ့ OS က Android 7.1.2 (Nougat) နဲ့ရောက်ရှိလာပေမယ့် Android Oreo ကို update လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားကတော့ ၅.၅ လက်မ ဖြစ်ပြီး ရွှေရောင်၊ နှင်းဆီရောင် နဲ့ အမည်း အစရှိတဲ့အရောင်တွေနဲ့ထွက်ရှိလာတာပါ။ အရောင် ၃ ရောင်ဆိုပေမယ့် Ebay မှာ နှင်းဆီ နဲ့ အမည်း ကကုန်နေတာကြောင့် လက်ရှိဝယ်ယူနိုင်တာကတော့ ရွှေရောင် တစ်ခုတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။
US မှာတရားဝင်ရောင်းချသေးခြင်းမရှိပေမယ့် အာရှနဲ့ ဉရောပဒေသတွေမှာတော့ တရားဝင်ရောင်းချနေတာ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်တည်းကပါ။ စျေးနှုန်းကတော့ $245 နဲ့ $365 လောက်ရှိပါတယ်။ Ebay မှာကတော့ $225 နဲ့ရောင်းချနေတာကြောင့် အနည်းငယ်သက်သာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Ebay ဟာ Top retailer ထဲမှာပါဝင်တာကြောင့် ယုံကြည်လို့ရနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
#Xiaomi Mi A1 available for $225 in US https://t.co/BfGJYVX7nW pic.twitter.com/Jb0jEezJ5o
— CellPhone Newz (@CellPhone_Newz) January 22, 2018
Android, Deal, Xiaomi